Wadahadaladii heshiis kordhinta Real Madrid ee Sergio Ramos oo burburay
Home Horyaalka Spain Wadahadaladii heshiis kordhinta Real Madrid ee Sergio Ramos oo burburay
Sergio Ramos ayaa lagu soo waramayaa inuu ku dhow yahay inuu ka tago Real Madrid isagoo xor ah wakiilkiisa iyadoo ay burbureen wadahadaladii heshiis kordhinta ee kooxda La Liga.
Daafaca mudada dheer, oo kujira xilli ciyaareedkiisii ​​16aad ee Bernabeu, qandaraaskiisa ayaa dhacaya xagaaga waxaana la rumeysan yahay inuu diirada u saaran yahay Paris Saint-Germain .
Madrid ayaa ku rajo weyneyd inay ka dhaadhiciso Ramos inuu sii dheereysto joogitaankiisa caasimada Spain, laakiin Diario AS ayaa sheeganeysa in wadahadalada ay qabow noqdeen.
Waxaa la soo jeediyay in, halka Los Blancos ay diyaar u tahay inay jabiso borotokoolka ay ku bixiso hal sano oo kordhin ah ciyaartoyda da’da Ramos, hadana diyaar uma ahan inay la mid noqdaan mushaharka daafaca dhexe.
Ramos wuxuu xor u ahaa inuu heshiis horudhac ah la galo kooxo kale ah tan iyo 1dii Janaayo, laakiin looma maleynayo inuu wadahadallo la yeeshay kooxo ilaa iyo haatan.
Previous articleJose Mourinho oo ku doodaya in Jurgen Klopp uu ku sii jeedo Tooshka in isaga ka badan
Next articleEric Garcia oo go’an ka gaaray in uu si bilaasha ah ugu ciyaaro Kooxda Barcelona